Barnamijka Arrimaha Siyaasada: Arinta Hub ka dhigista Mogadishu sidee loo arkaa? – Balcad.com Teyteyleey
Barnamijka Arrimaha Siyaasada: Arinta Hub ka dhigista Mogadishu sidee loo arkaa?
Barnaamijka Arrimaha Siyaasada ee Idaacada Somaliweyn waxaa uu asbuucan ku saabsan yahay arinta taagan maata ee magaalada Mogadishu oo dad farabadan isweyndiinaayaan arintaas iney tahay mid aan sax aheen oo waqtigaan uusan ku habooneen in hub ka dhigis lagu sameeyo maadaamada ay dowlada aysan damaanad qaadi karin amniga dadka degen caasimada dalka oo la rabo in hubka laga qaado.
Qaar kale ayaa waxay aaminsan yihiin in dowladda ay ku saxan tahay in ay hub ka dhigis lagu sameeyo shacabka degen magaaladda Mogadishu si loo sugo amniga dadka degen magaala madaxda Mogadishu.
Go’aanka ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya ee shirkii wasiirada ayaa wuxuu ahaa in ay dowlada federaaka Soomaaliyada ay hub ka dhigis ku sameyso caasimadda Soomaaliya ee Mogadishu si loo sugo amniga caasimadda.
Sidaas dardeed waxaan barmaanika arrimaha Siyaasada Somaliweyn ku wareysaneynaa qabiir u dhuundaboola arrimaha Siyaasada Soomaaliya oo lagu magaabo Cali Diini oo ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Barnaamijka waxaa inoo daadihinaaya Wariyaheena Yoonis H. Khaliif.
The post Barnamijka Arrimaha Siyaasada: Arinta Hub ka dhigista Mogadishu sidee loo arkaa? appeared first on Ilwareed Online.
Xagjiriin Kenyaati oo la sheegay inay Shabaabka ka cawiyaan fulinta Weerarada ka dhaca gudaha Kenya.
Qisadii ninkii dhulkii uu iibsady khasnada ka helay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay (8)